Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Xoogan oo ka Dhacay Ogaadeeniya oo loogu Awood Sheegtay Askarta Gumaysiga Ethiopia
Dagaalo Xoogan oo ka Dhacay Ogaadeeniya oo loogu Awood Sheegtay Askarta Gumaysiga Ethiopia
Wararka naga soo gaadhaya xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoraynta Ogaadeeniya ayaa ka warbixiyey dagaalo xoogan oo ka dhacay Ogaadeeniya kuwaasi oo khasaare xoogan loogu gaystay ciidamada gumaysiga Ethiopia iyo dabaqoodhiga ay ka samaysteen ogaadeeniya.
22 Feb 2017 Deegaanka lagu magacaabo Aftinta oo katirsan dagmada Awaare ee gobolka Jarar waxaa ciidamada daalan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 7 Askari waxaana lagaga dhaawacay 13 kale, sidoo kale dagaalka waxaa lagaga furtay 7 qori.
21 Feb 2017 Nogob yarey oo dagmada Dhanaan ee gobolka Shabeele ka tiran waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo luugu awood sheegtay ciidamada gumaysiga Ethiopia waxaana lagu gaadh siiyey khasaare ba’an.
22 Feb 2017 Qaldhishaa oo dagmada Baabili ka tirsan dagaal aad u culus oo ku dhex maray labada maleeshiyo oo ka kalala tirsan dabaqoodhiga gumaysigu ka samaystay Ogaadeeniya iyo Orimiya ayaa waxaa lagu jabiyey dabaqoodhiga Ogaadeeniya gumaysigu ka samaytay waxaana lagaga dilay 150 hawaarin ah waxaana lagaga dhaawacay ku dhawaad saddex horimood.
22 Feb 2017 Dagmada Maiso ee gobolka Shiniile waxaa dabaqoodhiga gumaysigu ka samaytay Ogaadeeniya lagaga gubay hal baabuur oo Qabaal ah.